Lalàna eo an-toerana UAE | Law Firms Dubai
Firenena tsotsotra i Dubai
mijanona azo antoka
Nandeha tany amin'ny Emira Arabo Mitambatra ve ianao atsy ho atsy? Raha izany dia misy vitsivitsy ihany ny lalàna sy lalàna tokony hotadidinao. Raha miadana ny UAE dia toerana cosmopolitan, dia manaraka fitsipika sy fitsipika izay tsy mitovy amin'ny fiaraha-monina tandrefana.
Ny lalàn'i Dubai sy ny fomba amam-panao dia miorim-paka amin'ny fanehoana fanajana
mampihatra ny hevi-dehibe
Tsy milefitra amin'ny zava-mahadomelina ny UAE (anisan'izany ny marijuana, izay ekena ho ara-dalàna any amin'ireo firenena tandrefana maro).
Ny sazy noho ny fananana, ny fanaovana an-tsokosoko, na ny fivarotana zava-mahadomelina dia henjana. Manodidina ny 4 taona an-tranomaizina farafahakeliny izy ireo, ka sazy fanamelohana ho faty.
Ankoatr'izay, ny fanafody fitsaboana sasany misy ny psychotropic na ny narcotic effects dia tsy avela. Raha mila lisitr'ireo habetsahana sy zava-mahadomelina mety entinao, zahao ny Minisiteran'ny fahasalamana UAE pejin-tranonkala.
Ny taona fisotroana ara-dalàna ao Abu Dhabi dia 18 - fa ny hotely tsy avela hisotro alikaola an'ireo latsaky ny 21. Ny tsy Silamo ao UAE dia mahazo fahazoan-dàlana fisotroana alika fisotro - na any an-trano izany, na any amin'ny toerana misy fahazoan-dàlana.
Ny fahazoan-dàlana iray dia mivoaka ho an'ny emirate (mitovy amin'ny fanjakana). Ka ny fahazoan-dàlana amin'ny emirate iray dia tsy manome alalana fisotroana hafa. Ary koa, ny fahazoana fahazoan-dàlana amin'ny alikaola dia mitaky anao ho mponina amin'ny fanjakana, na dia misy maningana aza.
Ireo mpizahatany any Dubai dia afaka mahazo fahazoan-dàlana 1 volana amin'ireo mpizara ofisialy 2 azy. Ho fanampin'izany, homena antontan-taratasy izy ireo hanamarinana raha azony ny lalàna mifandraika amin'ny fividianana, fihinanana, ary fitaterana zava-pisotro misy alikaola.
Noraran'ny lalàna UAE ny fisotroana tafahoatra na eo ambany fitarihan'ny besinimaro. Ny olona avy amin'ny firenena rehetra dia azo ampidirina am-ponja ary ampangaina, indrindra raha miteraka fihetsika manafintohina na tsy milamina ny fahamamoana.
Izany koa dia mihatra amin'ny mpandeha mamo tena ao anaty fitaterana amin'ny alàlan'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Ny lalàna UAE sy ny fomba amam-panao eo amin'ny fiaraha-monina dia tsy mamela ny firaisana ivelan'ny fanambadiana - na inona na inona fifandraisana misy eo amin'ny mpivady. Raha hita fa misy ny firaisana ara-nofo eo ambanin'ireto andalana ireto, dia mety hiharan'ny fanenjehana ianao, amin'ny fandroahana an-trano, na fanagadrana anao.
Ary ireo fenitra ireo dia mivelatra amin'ny sehatry ny fiainana koa. Ireo manana fifandraisana ivelan'ny fanambadiana dia tsy mahazo miara-monina. Ary tsy azonao atao ny mizara efitrano fandraisam-bahiny amin'ny olona tsy mitovy fananahana aminao (raha tsy hoe havana akaiky izy ireo).
Raha bevohoka ianao ivelan'ny fanambadiana, mety hampidi-doza ny fanagadrana sy ny fandroahana anao (miaraka amin'ny mpiara-miasa). Mety hangatahana porofo momba ny fanambadiana ianao mandritra ny fanamarinana ante-natal.
Ary koa, raha tsy manambady ianao ary manan-janaka, dia mety hanana olana voasoratra ao amin'ny UAE ny zaza vao teraka ianao, izay mety hitarika ihany koa ny fisamborana na ny fandroahana azy.
Fifandraisan'ny firaisana ara-nofo
Ny UAE dia tsy mankasitraka ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy na ny fanambadiana. Amin'ny ankabeazany, ny Emirà Arabo Mitambatra dia toerana mandefitra manaja ny fiainana manokana. Na izany aza, nisy ny toerana namoahana ny olona hanao firaisana ara-nofo mitovy fananahana (indrindra raha aseho fampisehoana fanehoam-pitiavana ampahibemaso izany).
Izany koa dia mihatra amin'ny expats sy mpizahatany. Ary eo amin'ity toerana ity dia manoro hevitra ny hamaky amin'ny antsipirihany ny zon'ny LGBT alohan'ny dian-tongotra.
Ny fanehoam-pankasitrahana ampahibemaso
Ireo dia ao amin'ny UAE, na manao ahoana na manao ahoana ny fanambadiana. Ary nisy ny toe-javatra izay nisy ny mpivady nosamborina noho ny fanorohana imasom-bahoaka.
Lalàna sy lalàna mifehy ny media
Ny lalàna UAE dia tsy mamela ny fakana sary na haino aman-jery ao anatin'ny fametrahana miaramila sy governemanta maro. Ary tsy azonao atao ny mandefa fitaovana (toy ny sary sy ny horonan-tsary) izay manakiana ny orinasa Emirati, na ny governemanta na ny governemanta.
Ny fanesoana ny governemanta dia heverina ho heloka bevava azo saziana. Ary tsara kokoa raha tsy maka sary olona eny imasom-bahoaka ianao (ary indrindra ny vehivavy eo amoron-dranomasina, izay nahatonga ny fisamborana tany aloha).
Ilaina ny fahazoan-dàlana amin'ny famokarana haino aman-jery, fampitana fampahalalana ary fampitana vaovao mifandraika amin'ny manampahefana UAE. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fahazoan-dàlana ilaina, dia ampirisihinay hitsidika ny Tranonkala filan-kevitry ny media nasionaly!
Ny loza lehibe indrindra amin'ny fiarovana anao ao Dubai dia ny tenanao
United Arab Emirates dia fanjakana Silamo iray fehezin'ny Lalàn'i Sharia. Mijanona maimaimpoana.